IN Converter - ON 12:33 AM No comments
ConvertXtoDVD v5.1.0.2 | 30.7 MB
ဒါကတော့ သိပ်ပြောစရာတောင်မလိုဘူး Video ဖိုင်တွေကို DVD အခွေအဖြစ် ၏
အလွယ်ဆုံးဖန်တီးနိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ကောင်လေးပါ အောက်မှာဒေါင်း
ConvertXtoDVD - 5.1.0.2 Released November 5th, 2013
0007216: [Information] see not responding foracouple of seconds at beginning of conversion (cedric) - resolved.
ConvertXtoDVD - 5.1.0.1
0007215: [Bug] Bad aspect ratio of thumbs in DVD menu with specific files (cedric) - resolved.
0007210: [Bug] chapter menu not editable in treeview in certain case refresh problem (cedric) - resolved.
0007211: [Bug] target size not respected (cedric) - resolved.
0006986: [Bug] Cut not working with OGG audio streams (cedric) - resolved.
0007208: [Bug] aspect ratio and video resize options are not being applied to files (cedric) - resolved.
0007209: [Bug] menu thumb not updated (cedric) - resolved.
Download Trial>>> Afilez (or) Davvas (or) tusfiles
Download Patch>>> solifiles (or) Uppit (or) tusfiles
TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.169 Full With Crack
IN Utilities - ON 12:05 AM No comments
TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.169 | 32.1 MB
Windows နဲ့ Browser တွေကို သွက်လက်မြန်ဆန်အောင်ဝင်းဒိုးကို အဓိက လေးစေတဲ့ Clean Registry, Defragment Registry, Remove Broken Shortcuts, Clean up Windows and Programs, Clean up Browser, Optimize System Startup and Shutdown, Defragment Hard Disk စတဲ့ နေရာတွေကို တချက်ကလစ်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ ရှင်းလင်းပေးမှာ ဖြစ်လို့.. လေးတတ်၊ နှေးတတ်၊ ဟမ်းတတ်တဲ့ စက်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားရမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပါပဲ..။ အသုံးပြုပြီးတိုင်း စက်ကို Restart ချပေးပြီးမှ ဆက်သုံးပါ..။ System ပိုင်းတွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် ပရိုဂရမ်လေး ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးမပြုခင် မိမိတို့ရဲ့စက်ကို Restore Point လေးတွေနဲ့ Recover လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးကို လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 32.1 MB ရှိပါတယ်..။
Download >>> Davvas (or) Uppit (or) tusfiles
IN Uninstaller - ON 11:53 PM No comments
Soft Organizer 3.25 Final | 3.8 MB
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ကျနော်တို့ ဝင်းဒိုးထဲက ပရိုဂရမ်တွေကို Uninstall နဲ့ ပြန်ထုတ်ပစ်ချင်တဲ့အခါ ဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်..။ ပရိုဂရမ်တွေ ထုတ်ပစ်တဲ့အခါ Traces လို့ခေါ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေရဲ့ လက်ကျန်ဖိုင်တွေနဲ့ ကီးတွေကိုပါ တခါတည်း လိုက်ရှာပြီး ရှင်းပစ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။လိုအပ်တဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 3.8 MB ရှိပါတယ်..။
New Version Notifikation
Ashampoo Movie Studio Pro v1.0.3.8 full with regkey
IN Photo and Media Editor Tools - ON 11:25 PM No comments
Ashampoo Movie Studio Pro v1.0.3.8 | 222.1 MB
Ashampoo ဟာ နည်းပညာ လောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့စဉ်က System Optimizer
တွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ antivirus, audio editor တွေအခု
လို Movie Editor တွေလည်းထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တွေများလာသလို
အရည်အသွေးကလည်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် အားပေးနှစ်သက်တွေတနေ့တခြား တိုးတက်
ရရှိနေပါတယ်။ အခု ဒီ Movie editor ဟာ ဆိုရင်လည်း အတော် ကို စုံလင်တဲ့ tools
တွေ Effect တွေနဲ့ နာမည်ယူဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်တာကြောင့် စမ်းသုံး
Support for HD (1080p and 720p)
Efficient task-oriented user interface
Video editing: Cut, trim and convert, adjust brightness, contrast, gamma, saturation and sharpness, rotate and mirror, adjust/normalize volumes
Opening/closing credits and text overlays with animation support
Transition effects: Black out, Circular, Fade, Move down, Move left, Move right, Move up, White out
Special effects: Greyscale, Sepia, Inverse, Old movie
Integrated video conversion tool
Output formats: AVI, MPEG-2, MPEG-4, M4V, MKV, WMV
Processor: Double-core 1,8 GHz processor
Sound Card : Any standard sound card (on-board or USB)
Download >>> AfileZ (or) Uppit (or) tusfiles